Maninona no tsy miseho amin'ny mailaka ny mailaka rehetra ary manamboatra azy | Avy amin'ny mac aho
Indraindray ny app Apple Mail amin'ny Mac anao dia mety hianjera ary aza ampidirina tsara ny mailaka rehetra natahirinao. Amin'ireto tranga ireto, izay matetika mitranga dia ny efijery na ny mailaka banga tsy misy mailaka roa na telo eo an-tampony, foana ny farany ary tsy mavesatra ireo hafatra.
Mpampiasa maro no mety mieritreritra fa tsy misy ireo mailaka saingy rendremana. izany matetika no mitranga amin'ny Gmail, kaonty Hotmail, sns. matetika tsy mitranga izany raha ny kaonty mailaka ofisialy Apple iCloud. Androany dia ho hitantsika ny fomba hamahana ity olana ity amin'ny fomba tsotra sy haingana.
Ny mailaka fotsiny no mila ampiarahinay
Mety ho olana lehibe izany satria tsy ny hafatra mailaka rehetra izay notehirizinay tao amin'ny kaontinay Gmail no niseho, tao anatin'ny mailaka mailaka tamin'ny Mac anay. Fa tsy misy zava-misy lavitra Mora tokoa ny mamerina ny mailaka rehetra ao amin'ny kaontintsika ary noho izany dia tsy maintsy averina ampifanarahinay fotsiny ilay kaonty.
Ataovy io fihetsika io dia hametraka antsika eo amboniny ambonin'ny kaonty izay tsy hahomby isika dia hanery bokotra ankavanana na tsindrio indroa amin'ny Trackpad ary kitiho mivantana ny safidy «Synchronize». Ho hitanao fa nampidirina ho azy indray ireo mailaka rehetra nanananao sy tsy nampidirina, miseho tahaka ny ahitantsika azy ireo ao amin'ny rindranasa Gmail na birao.
Misy ny mpampiasa sasany izay nanontany anay ny antony mahatonga ireo mailaka ireo hanjavona na hijanona tsy hifanaraka fotsiny ary izany ilay fampiharana Apple Mail dia mbola manana bibikely ihany, mbola sarotra ny mitantana ary indraindray mety tsy mamoaka mailaka tsara. Ny mpampiasa sasany dia mihevitra ny hampiasa mpitantana mailaka hafa fa miverina any amin'ny Mail foana izy ireo raha ny nanjo ahy ary azo antoka fa ianao koa ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Maninona no tsy miseho amin'ny mailaka ny mailaka rehetra ary manamboatra azy io
Afatory AirTag amin'ny Siri Remote amin'ny Apple TV raha manana mpanonta 3D ianao